5 Zvikonzero Vatengesi vari Kuisa Mari Zvakawanda muVatengi Kuvimbika Zvirongwa | Martech Zone
CrowdTwist, mhinduro yekuvimbika kwevatengi, uye Brand Innovators vakaongorora 234 vatengesi vedhijitari kumakambani eFortune 500 kuti vaone kuti kudyidzana kwevatengi kunosangana sei nezvirongwa zvekuvimbika Vakagadzira iyi infographic, Kuvimbika Mamiriro Ezvinhu, saka vashambadziri vanogona kudzidza kuti kuvimbika kunoenderana sei nehurongwa hwekushambadzira hwesangano. Hafu yezvibodzwa zvese yatove nehurongwa hwakagadzwa nepo 57% vakati vaizowedzera bhajeti yavo muna2017
Nei Vatengesi Vachiisa Mari Zvakawanda muVatengi Kuvimbika Zvirongwa?
Dhiraivha Kubatanidzwa - kunyangwe uri B2B kana B2C, kuve nechokwadi kuti vatengi vari kuita uye vanobudirira kushandisa zvigadzirwa zvako kana masevhisi zvichave nechokwadi chekuchengetedza uye kuwedzera kukosha.
Wedzera Kutengesa - kuchengetedza kumusoro kwepfungwa uye kupa mubayiro vatengi kunowedzera zvekubata uye mukana wekuita bhizinesi navo.
Wedzera Mari - sezvo iwe watotyora chivimbo chekuvimba, vatengi vemazuva ano vachashandisa mari yakawanda newe ... kuisa hurongwa munzvimbo yekuvapa mubairo kwakakosha.
Gadzira Kubatana - kupa mubayiro mutengi nekugovana uchapupu hwake ndiro rakanakisa kushambadzira kweshoko-remuromo iwe raunogona kudyara mukati
Kubatanidza / Kuwedzeredza Dhata - nekunzwisisa izvo zvinokurudzira vatengi vako, unokwanisa kugadzira zvipo zvaunoziva kuti vachazofarira.
Kuwana, kuchengetedza, uye upsell zvese zvinogona kukanganiswa neyakaomarara vatengi kuvimbika chirongwa kuita. 57% yemhando dzese dzinoona kuvimbika kwavo kwevatengi sekubudirira, 88% kana chirongwa chiri multichannel! Nehurombo, chete 17% yemhando vane multichannel vatengi kuvimbika chirongwa nekuda kwezvipingamupinyi zvekuenderana, kuendesa, uye kuunganidzwa kwedata.
Tags: brand brandchaungakasitomakuvimbika kwemutengimutengi kuvimbika kushambadzirakuchengetwa kwevatengimutengi mibayirokuongorora kwekushambadziratsvakurudzo